Koox Ganacsato U Dhashay Dalka Shiinaha Oo Booqday Magaalada Burco Ee Xarunta Gobolka Togdheer | Araweelo News Network (Archive) -
Burco(ANN) Koox Ganacsato ah oo u dhashay dalka Shiinaha ayaa maanta Booqday magaalada Burco ee xarunta Gobolka Tog-dheer, kuwaas oo danaynaya inay maalgashi ku sameeyaan Somaliland.
Ganacsatadan oo ka kooban 9 xubnood ayaa ujeedada booqashadooda xarunta gobolka Togdheer lagu sheegay inay tahay sidii ay wax uga ogaan lahaayeen fursadaha dhaqaale iyo waxsoosaar ee gobolkaa iyo gebi ahaanba Somaliland. Kooxdaa u dhashay dalka Shiinaha oo saaka ka boqoolay dhinaca magaalada Hargeysa waxaa maanta Magaalada Burco ku qaabilay Badhasaabka Gobolka Togdheer Yaasiin Maxamed Cabdi oo sheegay in maamulka gobolkaasi ay soo dhaweynayaan cid kasta oo maalgashi ku samaynaysa gobolka. Waxaanu ku wargeliyay kooxdaa inay booqan karaan meel kasta oo ay u baahdaan.
Weftigan ganacsatada ahi waxay booqdeen warshadaha Biyaha ee Maaxda, Warshada Saabuunta ee ILAYS iyo warshada hilibka ee magaalada Burco.Waxa kale oo ay soo mareen suuqyada magaalada Burco oo ay si gaar ah indhaha ugu hayeen badeecadaha kala duwan ee lagu iibiyo.
Xubnaha Weftiga shiinaha ayaa sheegay in socdaalkoodu la xidhiidho inay darsaan xaalada nabadgelyo iyo dhaqaale ee magaalada Burco ee gobolka Togdheer si ay mustaqbalka uga fuliyaan mashaariic ay ku maal gelinayaan oo dhinaca wax soo saarka ah. iyagoo xusay inay la dhaceen xaalada nabadgelyo iyo dhaqdhaqaaqa ganacsi ee ka socda magaalada Burco ee xarunta Gobolka Togdheer.